कन्या राशिलाई व्यापार, वृश्चिकलाई जागिरः कुन राशी भएका व्यक्तिलाई कुन पेसा शुभ ? – Dainik Samchar
February 8, 2021 105
काठमाडौँ । वास्तुशास्त्रमा कुनै पनि काम सुरु गर्नुपूर्व ज्योतिषसँग परामर्श लिने गरिन्छ। राशि अनुसार काम नगर्दा कतिपयलाई असफलता मिल्ने गर्दछ।
ज्योतिषशास्त्रका अनुसार कुन राशिले कुन काम गर्दा शुभ हुन्छ? हेरौँ
मेषः मेष राशि भएका व्यक्तिलाई व्यापारका तुलनामा जागिर राम्रो हुन्छ। बास्तुसँग सम्बन्धित काम गर्दापनि मेष राशिलाई फाइदा हुन्छ। सरकारी क्षेत्रमा रार्मो गर्न सक्ने यो राशिले फलामको काम गर्नु हुँदैन।
यो राशिको शुभ रङ्ग रातो हो । रातो कपडा लाएर काम गर्ने यो राशिका व्यक्ति सफल हुन्छन्। यो राशिका मानिसले मुसुरोको दाल साइत हेरेर दान गर्नु शुभ मानिन्छ।
वृषः यो राशिभएकाहरुलाई कलाकारिता फाप्छ। व्यापार गर्ने यो राशिका मानिसहरुले गाडीका पाठपूर्जा, इलेक्ट्रिक सामानको व्यापार, वा चलचित्र वा सङ्गीतसंग सम्बन्धित व्यापार गर्यो भने निकै फाप्छ।
सेतो रङ्ग यो राशिको शुभ रंग हो । किरानाको व्यापार पनि फाप्ने यो राशि भएका व्यक्तिहरुले हरियो कपडा हत्तपत्त प्राय: गर्नु हुन्न। यो राशिलाइ पनि समग्रमा जागिर नै फाप्छ।
मिथुनः यो राशि भएका व्यक्तिहरुले जागिर नै गरेको राम्रो हुन्छ। शुभ रंग हरियो भएको यो राशिका व्यक्तिहरु कला क्षेत्रमा निकै राम्रो हुन्छन् । यिनीहरुले अध्यापन क्षेत्रमा निकै राम्रो गर्न सकछन्।
यी राशि भएका व्यक्तिहरुले एकाउन्ट, फाइनान्स वा गणित विषय लिंदा धेरै राम्रो हुन्छ। व्यापारका हिसावले यो राशिका मानिसहरुलाई कृषिजन्य सामाग्री वा कृषिको व्यापार निकै फाप्छ।
कर्कटः यो राशि भएका व्यक्तिले जागिर भन्दा व्यापार नै गरेको रार्मो। जलीय वस्तु, सख्खर, चामल, चाँदी, शिक्षण, वस्त्र, स्त्रीको कपडा, रेशम, सौन्दर्य सामाग्री, रंग, लगायतका बस्तुको कारोबार गर्दा यो राशिलाई फाइदा हुन्छ। जागिर नै गर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्र राम्रो छ।
सिंहः यो राशिका व्यक्तिलाई जागिर नै फाप्छ। यो राशि भएका व्यक्तिले बसेर गर्ने काम गर्दा फाइदा हुन्छ। लेखापाल, कम्प्युटरको काम आदि बसेर गरिने काम गर्दा यो राशि भएका व्यक्तिलाई निकै फाप्छ। यो राशि भएका व्यक्तिले व्यापार नै गर्ने हो भने कपडाको व्यापार गर्दा राम्रो हुन्छ।
कन्याः कन्या राशि भएका व्यक्तिलाई जागिरको तुलनामा व्यापार नै फाप्छ। चिनीजन्य बस्तुको व्यापार गर्दा यो राशिलाई निकै फाइदा पुग्छ।
तुलाः यो राशिलाई जागिर बढी फाप्छ। यो राशि भएका व्यक्तिले अभियन, संगीत, सेना, व्यवस्थापन, कानून, बैंक, बिमा, फाइनान्स, मेसिनरी र कम्प्युटरको काम गर्दा निकै राम्रो हुन्छ। व्यापार नै गर्ने हो भनेपनि यहि क्षेत्रसंग सम्बन्धित काममा हात हाले फाइदाजनक हुन्छ।
वृश्चिकः यो राशि भएका व्यक्तिलाई जागिर बढी फाप्छ। रक्षा, कानून, सामाजिक सेवा, राजनीति क्षेत्र यो राशिलाई फाप्छ। रातो रंग शुभ रंग भएको यो राशिका व्यक्तिहरुलाइ सरकारी जागिर पनि निकै फाप्छ।
धनुः सुनचाँदीको व्यवसाय, किराना, सामाजिक सेवा, अध्यात्म गुरु, म्यानेजर लगायतका काम गर्दा यो राशिलाई निकै राम्रो हुन्छ।
यो राशिलाई पनि जागिरभन्दा व्यापार राम्रो हुन्छ। व्यापारमा पनि ठेक्कापट्टामा लाग्ने हो भने यो राशि भएका व्यक्तिले निकै राम्रो आम्दानी गर्छन्।
मकरः यो राशिलाई पनि प्राय: व्यापार नै फाप्छ । मेशिनरी, मर्मतको काम, कम्प्युटर, सिभिल इञ्जिनियर, आर्किटेक्ट, वास्तु विज्ञान, गुप्तचर, वैज्ञानिक जस्ता पेशामा यो राशिलाई निकै फाप्छ। यो राशिले पानीसंग सम्बन्धित काम भने नगरेको राम्रो।
कुम्भः यो राशि भएका व्यक्तिलाई व्यापार फाप्छ। यो राशि भएका व्यक्तिको कार्यक्षेत्र अधिकांश मकर राशिसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ । किनभने यी दुवै राशिको स्वामी शनि हो।
त्यसैले यो राशिलाई पनि प्राय: व्यापार नै फाप्छ। मेशिनरी, मर्मतको काम, कम्प्युटर, सिभिल इञ्जिनियर, आर्किटेक्ट, वास्तु विज्ञान, गुप्तचर, वैज्ञानिक जस्ता पेशामा यो राशिलाई निकै फाप्छ।
मीनः यो राशि भएका व्यक्तिलाई बढी जागिर फाप्छ। भेइकल, गुप्तचर विभाग, फायर सर्भिस र अदालती सेवामा यो राशिलाई सफलता प्राप्त हुन्छ। यो राशिका व्यक्तिले सकेसम्म मसलाजन्य उत्पादनको काम नगर्दा राम्रो हुन्छ।
Prevतीन पटक सिजरिङ गरेकी निराले नर्भिकमा चौथो पटक शल्यक्रियाबाट बच्चा जन्माइन
Nextभागरथीको न्या’यको निम्ति रबि लामिछाने बैतडी प्रस्थान…
खुशीको खबर : अब वृद्धाभत्ता मासिक यती धेरै बढ्यो, घरमैं पैसा बुझन पाइने !
प्रदेश ट्राफिक कार्यालय भरतपुरमा (591)
केही कुरा याद हुँदैन ? यी आठ तरिकाले बढाउनुहोस् दिमागको क्षमता (307)
वास्तु शास्त्रः यी पाँच दोष, जसले घरमा निम्त्याउँछन् गरिबी र अशान्ती (306)
एम्बुलेन्स सञ्चालन भद्रगोल : निर्देशिका गज्जबको, कार्यान्वयन भेट्टाउनै गाह्रो ! (300)
नरिवल तेलको विवादः यसले फाइदा गर्छ कि साँच्चै विषालु हो ? (286)
नेकपामा किन असन्तुष्ट छ माधव नेपाल समूह ? (280)
भर्खरै आयो दु:खद खबर : विद्यार्थी बोकेको बस दुर्घटना,हुँदा ५ विद्यार्थीको मृत्यु मनमा दया भए (RIP) लेख्नुहोला:, ’ (277)
यति धेरै भत्ता दिएर १ लाख म्यादी प्रहरीको भर्ना खोलिँदै , एक महिनाको तलब कति ? (262)
बुबालाइ बृद्धआश्रममा छोड्ने छोराले भने,‘बाऊ भनेर त्यो बुडोलाई पाल्दा धर्म लाग्छ भने थुक्छु म त्यो धर्मलाई’ भिडियोसहित(भिडियोसहित) (237)
जतिसुकै बिजी भए पनि २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नुहोला : तपाईंको जीवनमा पक्कै परिवर्तन आउनेछ ! (224)
भर्खरै बिवाह गरेका २५ वर्षीय शाही, श्रीमतीले श’वलाई अंगालो हा’लेर धरधरी रोईंन
सवारीको ठक्करबाट कोटेश्वर क्याम्पसकी छात्राको निधन, चक्रपथ अवरुद्ध
प्रचण्डलाई जुत्ता हा’न्नेले खोले नयाँ पार्टी